FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MASTIFF ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Mastiff anglisy
Sassy the Mastiff dia tonga tamin'ny faha-3 tamin'ny ankapobeny tamin'ny National Mastiff Speciality niaraka tamin'ny fidirana 79. Ch. SalidaDelSol MistyTrails Sassy R.O.M., sary natolotr'i MistyTrails Mastiff
Mastiff anglisy taloha
Alika goavambe ny Old English Mastiff. Ny Mastiff dia manana lohany lehibe sy mavesatra ary toradroa miaraka amina fijanonana voamarika tsara eo anelanelan'ny masony. Tokony ho ny antsasaky ny halaviran'ny karan-doha no fonosana. Ny maso volontsôkôlà somary salantsalany ka hatramin'ny hazelà mainty dia mivelatra malalaka miaraka amin'ny sarontava mainty manodidina azy. Maizina ny lokony. Ny sofina kely manana endrika V dia mitovy amin'ny karandohany ary miloko mainty. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety fa ny manaikitra kely kosa dia azo ekena amin'ny peratra fampisehoana manome ny nify tsy hiseho rehefa mikatona ny vava. Ny rambony dia miorina ambony miaraka amina fotony midadasika, manidina hatramin'ny teboka iray ary mahatratra ny hock. Ny lokon'ny palitao dia misy volom-borona volamena, volomaso maivana, apricot, volafotsy, tigra na brindle.
Alika goavambe sy mahery ary hozatra ny The Mastiff. Tsy mitovy ny haavon'ny Dominance, na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza, saingy matetika dia antsoina hoe goavambe malefaka izy io. ny alika mpiambina teraka , ny Mastiff dia mahalana no mivovo, fa izy io dia voajanahary hiaro ny faritaniny sy ny ankohonany, ary mpiambina mangina kokoa fa tsy mpiambina. Rehefa an mpiditra an-tsokosoko tratra ny alika dia azo inoana kokoa fa mitazona azy ireo, na amin'ny fandrika azy ireo eo an-jorony na amin'ny fandriany eo ambonin'izy ireo fa tsy amin'ny fanafihana rehetra. Tsy mila mampiofana ny Mastiff anao hiambina ianao. Na sariaka toy inona aza izy io, raha mahatsapa loza izy dia hiambina irery raha tsy eo ny tompony hilaza aminy raha tsy izany. Matoky tena sy miambina ireto alika ireto dia manam-paharetana ary heverina ho tsara amin'ny ankizy. Manan-tsaina, tony, mahonon-tena ary mora zaka, ity karazany ity dia tena lehibe sy mavesatra. Izy ireo dia mamaly tsara amin'ny fampiofanana hentitra, saingy malefaka ary manam-paharetana. Tian'izy ireo ny mampifaly ary mila mitarika olona maro. Araraoty tsara izy ireo hisorohana azy ireo tsy ho mifanakaiky amin'ny olon-tsy fantatra. Ny tompon-trano dia mila hentitra, milamina, tsy miovaova, matoky tena amin'ny rivotra voajanaharin'ny mifandray amin'ny Mastiff tsy ilaina izany fanapahana izany. Raha fiaraha-miasa amin'ny fitarihana mety dia hifanaraka amin'ny amboa hafa. Ny Mastiff dia mazàna drool , mangetaheta ary mitroka mafy. Mety ho somary sarotra ampiofanina . Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Io ihany no làlanao fifandraisana amin'ny alikanao mety ho fahombiazana tanteraka.
Pitbull mpanao herisetra 4 volana
Haavony: Lahy avy amin'ny 30 santimetatra (76 cm) Vavy amin'ny 27 santimetatra (69 cm)
Milanja: Lehilahy tokony ho 160 kilao (72 kg) Vehivavy sahabo ho 150 pounds (68 kg)
Iray amin'ireo karazana henjana indrindra, ny Mastiff lahy dia mety mihoatra ny 200 pounds.
Mitandrema amin'ny displasia hip. Toy ireo alika ireo mora mitsonika , fahano sakafo kely roa na telo isan'andro, fa tsy iray lehibe. Mora voan'ny CHD, torsion gastric, ectropion, PPM, hyperplasia amin'ny fivaviana, dysplasia amin'ny kiho ary PRA. Indraindray hita dia ny aretim-po.
Ny Mastiff dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary hisy tokontany kely.
Mastiff dia mirona ho kamo saingy hihazona ho tsara sy falifaly kokoa raha omena fanatanjahan-tena matetika. Toy ny alika rehetra, tokony horaisina ny Mastiff Amerikanina dia an-tongotra tsy tapaka isan'andro manampy amin'ny famoahana ny heriny ara-tsaina sy ara-batana. Voajanahary alika ny mandeha. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Tokony halefa imasom-bahoaka foana izy ireo.
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Borosio amin'ny borosy mafy volo ary esory amin'ny tapa-kazo na chamois mba hamaranana. Mandro sy shampoo maina rehefa ilaina izany. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny English Mastiff dia natsangana tany Angletera. Karazana tranainy iray, efa naseho tao amin'ny tsangambato egyptiana hatramin'ny 3000 talohan'i Kristy. Niady niaraka tamin'ny miaramila britanika tamin'ny taona 55 talohan'i Kristy ny karazany. Caesar dia nitondra fonosana Mastiff nankany Roma izay naseho ireo alika ireo ho toy ny gladiatera arena ary noterena hiady amin'ny gladiatera olombelona, ​​liona, fanodinam-bolo, fihazana bera ary ady amin'ny alika. Taty aoriana dia nanjary nalaza tamin'ny tantsaha tany Angletera izy ireo izay nampiasan'izy ireo ho mpiambina, mpiaro ny amboadia sy mpihaza mampidi-doza hafa ary ho alika mpiara-mitory aminy. Tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo dia nilazana ny Mastiff: 'Toy ny liona amin'ny saka, dia toy izany koa ny mastiff raha ampitahaina amin'ny alika.' Inoana fa nisy Mastiff tonga tany Amerika tamin'ny Mayflower. Taty aoriana dia betsaka no nafarana. Toy ny ankamaroan'ny karazany tamin'ny faran'ny Ady Lehibe ll, dia saika ny karazany lany tamingana any Angletera. Alika dia nafarana avy any Etazonia sy Kanada ary miorina tsara any Angletera indray. Ny sasany amin'ireo talenta an'ny Mastiff dia misy: mpiambina, mpiambina, asan'ny polisy, asa miaramila, fikarohana sy famonjena, ary famoahana lanja.
Ity alika kely ity dia naterak'i MistyTrails Mastiff. Vaky trano izy tamin'ny fampiasana ilay Misty Fomba . Aseho eto amin'ny 4 volana. I Thumbelina no renin'ilay zanak'alika ity izay miseho any Canada amin'izao fotoana izao ho Mastiff voalohany ao amin'ny firenena. Sary natolotry ny MistyTrails Mastiff.
Cora the English Mastiff puppy at 4 volana - sary nahazoana alalana tamin'ny MistyTrails Mastiff.
sarin'ireo tondro fohy fohy alemana
Cora the English Mastiff puppy at 2.5 volana - sary natolotry ny MistyTrails Mastiff.
Duvall ilay Mastiff purebred tamin'ny faha-2 taonany— 'Duvall dia alika famonjena izay sitrana amin'ny fandidiana hip. Tony tokoa izy ary tsara fitondran-tena. '
'Ity no sarin'ny Mastiff Sadie anglisy taloha miaraka amin'i Jupe saka. Handefa izany aho mba hampisehoana fa tena malemy fanahy ireo alika ireo. Mpinamana ireto roa ireto. Novidiana tamin'ny mpiompy iray tany Columbus, Ohio i Sadie, ary nilanja 170 lbs. tamin'ny fizahana hopitaly farany nataony. Vao 2 taona mahery izy tamin'ireny sary ireny. '
'Nampiasainay ny teknikan'ny' Bark Busters 'hampiofanana azy. Alika ao anaty / ivelany izy ary mandehandeha eny an-tokontany feno fefy sy vozon'akanjo tsy hita maso. Miaraka amin'ny alika kely avy Labrador Retriever mainty. Nampahafantarina azy ireo kittens roa fony izy tokony ho 1 sy sasany teo ho eo. Manana toetra tsara izy ary malemy fanahy sy be fitiavana amin'ny mpianakavy rehetra (anisan'izany ny saka). '
Sassy ilay Mastiff anglisy sy izy fako misy alika kely Mastiff 11 mahafinaritra tamin'ny 5 herinandro, sary natolotry ny MistyTrails Mastiff
Leo the English Mastiff puppy amin'ny 8 herinandro, milanja 14 pounds
Leo zanak'alika English Mastiff amin'ny 6 volana, milanja 60 pounds eo ho eo
Iron Hills Mastiff sy Arzantina Dogos, sary natolotr'i Phoebus
'Ity i Amon, Mastiff Old English 5 taona (lahy). Izy no alika tsara indrindra izay nananako tena mahay mandanjalanja sy mankatò. Tiany daholo ny olona ao amin'ny fianakaviana ary maneho fitiavana ny olon-drehetra izy. Tena marani-tsaina izy ary mino aho fa misolo tena tsara an'io karazany io amin'ny endriny sy ny fitondrantenany. Nanavotra azy aho 2 taona lasa izay rehefa nividy azy tamin'ny lehilahy iray izay nampijaly azy aho. Nilanja 55 kg (121 pounds) ary 95 kg (209 pounds) izy ankehitriny. Alika tena sambatra i Amon ary tianay ny manana azy ao amin'ny fianakavianay, indrindra ny zanako lahy Kevin. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Mastiff
Saripika Mastiff 1
Saripika Mastiff 2
Saripika Mastiff 3
rottweiler sy Jack Russell Mix
Labrador mavo 8 volana
pitbull fotsy miaraka amin'ny mainty mangirana
mixer an'ny mpiady mpiady boxer alemanina